ဦးတေဇ ရဟတ်ယာဉ် ရေခဲတောင်ပေါ် ကျွံကျ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဦးတေဇ ရဟတ်ယာဉ် ရေခဲတောင်ပေါ် ကျွံကျ
Posted by zaw mg on Feb 23, 2011 in News |6comments
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇ စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ရဟတ်ယာဉ် သည် ကချင်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်း ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်တွင် ဆင်းသက်ရာ ရေခဲပြင်အတွင်းသို့ ကျွံကျသွားကြောင်း အင်တာနက်သတင်းများအရသိရသည်။
၂၂ ၊၂ ၊၂၀၁၁ ရက်နေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ဦးတေဇ အပါအ၀င် ထူးကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်း ၆ ဦးသည် ပူတာအိုမြို့မှ ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်သို့ ယူရိုကော့တာ (Eurocopter) အမျိုးအစား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြောင်း၊ ထို့နောက် ဆင်းသက်ရာ ရဟတ်ယာဉ် တဖက်ခြမ်းသည် ရေခဲပြင် အတွင်း၌ နစ်မြုပ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သူမျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းမရှိကြောင်း တပ်မတော် (လေ) အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောကြားချက်အား ကိုးကား ၍အင်တာနက်သတင်းများမျက်နှာများတွင်ဖေါ်ပြကြသည်။
ထို့အပြင် ယင်းရဟတ်ယာဉ်သည် ဦးတေဇ၏ ကိုယ်ပိုင် ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေ ၁၂၀၀၀ ခန့်အထိ ပျံသန်းနိုင်ကြောင်း ခရီးစဉ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ လာမည့် မတ်လတွင် ရေခဲတောင်တက်ရန် အတွက် ကောင်းကင်မှနေ၍ လမ်းကြောင်းရှာရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သြော် …ကဲ …ကုသိုလ်ကံကောင်းပုံများ ကယ်မယ့်သူကအသင့်
၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်လုပ်ရမယ် ( ဘာမှမဖြစ်လို့ )
I am runningawebsite that collects and share weather and natural disaster informations in Myanmar language. says:
A rescue team has made contact with businessman Tay Za and the rest of the group on board, but has been unable to reach them in the northernmost state of Kachin more than 24 hours after they landed, an official said. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hgf2B5mMjrTBDXbE8fq61ZD5D4jg?docId=CNG.4af4e4e47b3036e50e619ac9358a9ec4.281
ထူး က လုပ်ချလိုက်ရင်တော့ ထူးထူးခြားခြားတွေ ချည်းပဲ၊ အကုန်လုံး ကျပ်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာ သူက ကမြင်းကြော ထဖို့တောင် ကြံနေသေးတယ်၊ အင်းလေ… ပိုက်ဆံတွေ ထားစရာ မရှိတော့ဘူး ထင်ပ